Wararka - Faallooyinka Macaamiisha
Ka dib muddo dheer oo horumarineed oo ku saabsan warshadaha shumaca, waxaan Winby shumaca soo uruurinnay macaamiil badan waxaanan ka helnay ammaan badan dalal badan. Kuwa soo socda ayaa ah qaar ka mid ah macaamiisha 'aqoonsiga alaabteena iyo adeegyadeena.
▶ kani waa mid cabsi badan, waxaanan ku tijaabiyay shumacyadayda si fiican ayayna u shaqeeyaan, laakiin waxaan ubaahanahay 2-3 saacadood si aad u sameysid barkad dhalaalay si fiican. laakiin guud ahaan waan jeclahay sheygan. Waxaan rajaynayaa inay jirto wax ikhtiyaar ah, sida dhexroolka siligga loogu talagalay weelka oo leh dhexroor 7-8cm ah.
End Wendy ayaa ila soo xiriirtay amarkan oo adeeg macmiilkeedu aad buu u fiicnaa! Waxaan aad ugu talinayaa la macaamil shirkadan.
▶ Waxaan dalbaday dhalooyinka quraaradaha madow, waxay la mid yihiin sawirka. Waxaan jeclaan lahaa dhoofinta dhaqsaha badan laakiin waxay ku dhowaadeen sida saxda markii iibiyuhu yidhi waan jeclaan lahaa oo waxaan helay macluumaad badan oo rar iyo raad raadin ah. Si wanaagsan ayaa loo xirxiray oo 300 oo dhalo ayaa amar lagu siiyay mid kaliya ayaa jabtay.
Aad ayaan ugu faraxsanahay tayada iyo muuqaalka sheygan. Waxaan raadinayey weel beddel u ah meheraddeyda shumaca oo waxaan ka helay amar ah dhalooyinka 14oz matte madow iyo caddaan ah oo leh dabool alwaax ah. Waxaan amarkeyga ku helay si dhakhso leh anigoo tixgelinaya inuu ka yimid Shiinaha. Waxaan rajeynayaa inaan dhigo amarka weyn mustaqbalka dhow markaan awoodo MOQ-da 1,000 cutub.
Can Shumacyo tayo wanaagsan leh. Si taxaddar leh loo buuxiyey oo loo geeyey waqtigii loogu talagalay. Adeeggu wuxuu ahaa mid deg deg ah oo saaxiibtinimo leh. Mar labaad ayaan dalban lahaa
▶ Daboolka waxay ahaayeen sida saxda ah ee lagu sharaxay adeeguna aad buu u fiicnaa. Xaqiiqdii waan ku qanacsanahay.
Icks alwaaxyo tayo wanaagsan leh oo si fiican u gubta. Wendy Fu waa qof xirfad badan oo aad u wanaagsan in lala xiriiro. waxay kula talin doontaa waxaad u baahan tahay. qiimaha sidoo kale waa daacad. mahadsanid!
Waa kuwan sawirada macaamiisheena.
Waqtiga dhejinta: Feb-07-2021